Ikhalenda I-ZOO yikhithi lokubopha iphepha elenza izilwane eziyisithupha, ngalinye lisebenza njengekhalenda lezinyanga ezimbili. Iba nonyaka ogcwele ubumnandi nge "zoo yakho encane"!
Iqoqo Le-Watchface I-ttmm iveza ukuqoqwa kwezinhlelo zokusebenza zewashi, yenzelwe ama-smartwatches ngezikrini ezimnyama nezimhlophe ze-144 × 168 ezifana nePebble neKreyos. Uzothola lapha amamodeli angu-15 wezinhlelo zokusebenza ezilula, ezinhle nenhle zokubuka. Ngoba zenziwe ngamandla amsulwa, zifana neziwidi kunezinto zangempela. Lawa mawashi angobungani bomnotho nobungane kakhulu kunanini na owake waba khona.
Umagazini Ngokusekelwe emcabangweni wokusuka nokufika lo magazini webhodi uhlukaniswe izingxenye ezimbili: Ukuya / Ukuza. Ukuya kumayelana namadolobha ase-Europe, okuhlangenwe nakho kokuhamba namathiphu wokuya phesheya. Kubandakanya ipasipoti yomuntu odumile kuhlobo ngalunye. Iphasiphothi ye- "Republic of Abahambi" inemininingwane yomuntu mayelana nalowo muntu kanye nengxoxo yabo. Ukuza konke kumayelana nomqondo wokuthi okungcono kakhulu kohambo ubuyela ekhaya. Ikhuluma ngokuhlobisa ikhaya, ukupheka, imisebenzi okufanele yenziwe nomndeni wethu kanye nezindatshana ukujabulela ikhaya lethu kangcono.
Lwesithathu 9 Juni 2021
Ikhalenda I-ZOO yikhithi lokubopha iphepha elenza izilwane eziyisithupha, ngalinye lisebenza njengekhalenda lezinyanga ezimbili. Iba nonyaka ogcwele ubumnandi nge "zoo yakho encane"! Impilo enomklamo: Imiklamo yekhwalithi inamandla wokushintsha isikhala futhi iguqule izingqondo zabasebenzisi bayo. Banikeza induduzo yokubona, ukubamba nokusebenzisa. Zihlotshiswe ngokukhanya nezinto zokumangala, zicebise isikhala. Imikhiqizo yethu yoqobo yakhelwe kusetshenziswa umqondo "Wokuphila Nokwakhiwa".
Lwesibili 8 Juni 2021
Isicelo Sewashi I-Dominus plus iveza isikhathi ngendlela yangempela. Njengamachashazi asezicucu ze-dominoe amaqembu amathathu amachashazi amelela: amahora, amashumi emizuzu nemizuzu. Isikhathi sosuku singafundwa kusuka kumbala wamachashazi: luhlaza okwe-AM; ophuzi we-PM. Uhlelo lokusebenza liqukethe isibali sikhathi, i-alamu nezinsimbi. Yonke imisebenzi iyatholakala ngokuthinta amachashazi ekhoneni we-discrete. Ibinomklamo wokuqala nobuciko obethula ubuso bangempela bekhulu lama-21. Yakhelwe ku-Symbiosis enhle ngamacala amadivayisi aphathekayo we-Apple. Ine-interface elula enamagama ambalwa nje afanele ukuyisebenzisa.
Ikhadi Lomlayezo Vumela iphepha lesikebhe elisebenza ngamaphepha lithumele imiyalezo yakho ebalulekile. Bhala umyalezo wakho emzimbeni bese uthumela kanye nezinye izingxenye ngaphakathi emvilophini. Leli ikhadi elijabulisayo lomemukeli abangahlangana balikhombise. Faka izilwane eziyisithupha ezihlukene: idada, ingulube, i-zebra, i-penguin, indlulamithi nomhlanga. Impilo enomklamo: Imiklamo yekhwalithi inamandla wokushintsha isikhala futhi iguqule izingqondo zabasebenzisi bayo. Banikeza induduzo yokubona, ukubamba nokusebenzisa. Zihlotshiswe ngokukhanya nezinto zokumangala, zicebise isikhala.
Marais Ukufakwa Kwezipho Zamakhekhe Lwesihlanu 30 Julayi
Cliff House Ukuhlala Ngempelasonto Lwesine 29 Julayi
Chongqing Zhongshuge Isitolo Sezincwadi Lwesithathu 28 Julayi
Ikhalenda Iqoqo Le-Watchface Umagazini Ikhalenda Isicelo Sewashi Ikhadi Lomlayezo